Panamà · Global Voices teny Malagasy
Tantara misongadina mikasika ny Panamà
SARIPIKA: Olombelon'i Amerika Latinina
Arzantina04 Desambra 2013
Melohin'ny Fiangonana Katolika Ny Lalàna Fanamombàna Any Panama
Fitantanam-pitondrana09 Marsa 2013
Panama: Mahantra Saingy Tsy Adino Noho Ny Lahatsary Aty Anaty Aterineto
Fampandrosoana27 Avrily 2012
Tantara mikasika ny Panamà
Ho an'ireo mainty sy indizeny ao Amerika Afovoany, Misy Vidiny Ny ain'ny Mainty (Black Lives Matter)
Costa Rica 10 Jona 2020
"Fanavakavahana, rafitra mpanjakazaka sy mpamono, izany no namidin-dry zareo manerana ny tany lazainy ho toerana mendrika honenana indrindra eto an-tany.."
Arzantina 30 Marsa 2019
Karaiba 30 Novambra 2018
Arzantina 31 Oktobra 2018
Fanabeazana 22 Oktobra 2018
Zara raha tafiditra amin'ny aterineto sy ireo teknolojia hafa ny vondrona indizena Kuna any Panama. Avy amin'ny foko Kuna i Gilberto Alemancia, sady mpaka sary sy mpitarika mpizaha tany ampy traikefa. Nitarika ny atrikasa momba ny teknika fipihana sary amin'ny fakàntsary niomerika tamin'ireo ankizy any amin'ny faritra lavitra andriana ao amin'ny firenena izy tamin'ny fitsangatsanganana sasany. Nanam-potoana niresadresahana tamin'i Alemancia momba ny hafanàm-pony i Melissa De León.
Panama: Zavatra mahavariana eny amin'ny lalambe
Indraindray rehefa mandeha fiara amin'ny làlan'i Panama dia mahita zavatra hafahafa tokoa. Raha tsy nisaraka tamin'ny fakantsary teny an-tanana i CaDs dia nahazo ny sarin'ny lehilahy iray natory tamin'irony 'hamac' (fatoriana mitsingevana) irony taorian'ny kamiao iray am-pandehanana izy.
Manoratra Bilaogy Any An-tsesitany
Amerika Avaratra 10 Avrily 2018
Mety antony hafa no mahatonga ny olona hanao sesitany ny tenany fa tsy ny fanaovana bilaogy irery ihany.
Mihovitrovitra Miaraka Amina Fetiben'ny Mozikan'i Amerika Afovoany i Costa Rica
Karaiba 10 Febroary 2018
Milalao lokanga ny tongotra ary mively amponga ny rantsan-tanàna raha toa kosa miandry ny PapayaFest ireo mponin'i Costa Rica.
Arzantina 19 Desambra 2017
Mitondra antsika hamantatra ireo sakafo mafilotra manerana ny tontolon'ny fandrahoan-tsakafo any Amerika Latinina i Chef Melissa ao anatin'ireo antsoina hoe "fitafiana maloto" any Kiobà mankany amin'ny guarapo de piña ao Venezuela; miainga amin'ny vokatra organika any Orogoay hatrany amin'ny 'tri-tip'mafilotra any Arzantina sy ny fromazy matsiro any Panama.
Blaogy Amerika Latina Tsara Indrindra: The Cooking Diva
Arzantina 27 Septambra 2017
"Navoaka androany ireo mpandresy tamin'ity taona ity ary faly isika manambara fa ny Cooking Diva, weblog manokan'ilay mpikambana ato amin'ny Global Voices, no voafantina ho "Weblog Amerikana Latina Tsara Indrindra."